နတ်ဆိုးကြီး Junior Member
07-21-2016, 12:43 PM ကလေးတုန်းက ကြုံတာလေးတွေ မျှဝေရအောင်ဗျာ.....
နတ်ဆိုး ငယ်ငယ်က မိန်းခလေးဖြစ်ချင်တာ... ၅ နှစ်သားလောက်ကတည်းက နတ်နတ် ဂွေလိမ့်နေပြီ... အဲ...ဟိုစိတ်ဒီစိတ်မရှိပေမဲ့ ဂွေလိမ့်ချင်လာရင် ဂျိုးလေးကထောင်လာရော.... အမတွေကို ကြည့်တော့ သူတို့မှာထောင်စရာမပါတော့.... ပိပိလေးရှိရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ် အခုတော့ ဒုတ်ကလေးပဲကောင်းပါတယ်လို့.... Find
Thanks given by: fightermg1433
10-12-2016, 11:20 AM ငယ်ငယ်က ဝမ်းကွဲ အမ ၂ ယောက်နဲ့ အဖြစ်လေး
နတ်ဆိုးက ၄ နှစ် ..နတ်ဆိုးအမ အကြီးက ၁၀ နှစ်.....အမငယ်က ၅ နှစ်..
တနေ့တော့ အဘွားဖြစ်သူက မောင်နှမတွေ အိပ်ခိုင်းမယ် ဆိုပြီး အကြီးဆုံးအမကို ဦးဆောင် သိပ်ခိုင်းတာပေါ့..
အမအကြီးဆုံးက အဘွား ရှိတုန်းကို ငြိမ်ငြိမ်နေခိုင်းပြီး အဘွားလဲထွက်သွားရော ဆော့ရအောင်တဲ့..
ပြီးတော့ သူဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီး ပိပိလေးရှိတဲ့နေရာကို အီကြာကွေးအသေးတဲ့ ဖင်နေရာကိုတော့ အီကြာကွေး အကြီးတဲ့
နတ်ဆိုးက ဝယ်ရတဲ့လူပေါ့...အမငယ်ကလဲ သူမှာလဲ အီကြာကွေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီး ချွတ်ပါလေရော...
ဟား...အဲတုန်းက အီကြာကွေးမှန်း စမူဆာမှန်းမသိတဲ့ဘွ.. အမအကြီး ပိပိကို သေချာ ဖြဲကြည့်ဖူးတယ်....(အဲတုန်းက ကိုယ့်အမြင်က ) ခပ်ပြဲပြဲပေါ့...
အတွင်းနှတ်ခမ်းသားလေးရော ဆိုတော့ အထဲမှာ နီထွေးနေတာ... အရည်လေးတွေတောင်ပါသေးတယ်။
အဲတုန်းက လောင်းတီးနေလား မတီးနေလားတော့ မသိဘူး.. :roll: :roll: :roll:
နောက်ပြီး ပိပိနံလေးကို သဘောကျတာလဲ အဲချိန်ကတည်းက ထင်တာပဲ....သူ့ပိပိလေးထိလိုက်ရင် တွန့်တွန့်သွားတာ ....
အားရအောင် ဆော့ပြီး အားရအောင်ကြည့်ပြီးမှ နတ်ဆိုးလဲ အိပ်ချင်လာတာနဲ့ အိပ်လိုက်တော့တယ်...
အဲတုန်းက အမငယ်ကိုတော့ ဘာမှ မလုပ်လိုက်ရဘူး...အမငယ်နဲ့ အဲလို မထိတထိဇာတ်လမ်း နောက်မှ ဆက်တာပေါ့။
10-18-2016, 09:35 AM ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုရင်တော့ များများစားစားမရှိဘူးဗျို့. ဒါပေမယ့် ဒီဆိုဒ်လေးကိုကြိုက်လို့ နည်းနည်းဝင် Share သွားပါတယ် . ၅ တန်း ၆ တန်းလောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ် . သူငယ်ချင်းတွေဆော့ရင်း လှေကားဘောင်ကို စီးလေ့ရှိကြတယ် . တစ်ရက် စီးနေရင် နဲ့ လုစီးကြ ပါလေရော .ကိုယ်က လှေခါးဘောင်ကို ခွပီးစီးလိုက်မိတယ်အရင် . သူငယ်ချင်းကောင်မလေးကလည်း နောက်ကတင်းလိုက်လု စီးတယ်. ကိုယ်က ကွေ့ရောက်တော့ မကွေ့သေးဘဲ တွန်းမ့လို့စောင့်နေတုန်း သူ့တင်ပါးနဲ့ ကိုယ့်ငယ်ပါး မိတ်ဆက်မိကြပါလေရော . အဲ့က စပီး အဲ့ကိစ္စကို ဘာလဲ ဆိုတာ သိလာတယ် ထင်တာပဲ . နောက်ပိုင်းကြတော့ တစ်ချိုကောင်မ လေး တွေ အဲ့လိုစီးတာမျိုးသ ဘောကျ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး စီးကြတာလားမပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့လည်း ရှောင်ကြသဗျ. အသက်တူကြပေမယ့် စိတ်ပါမပါကွာတာလား . ဗဟုသုတ ရှိမရှိကွာကြတာလား . မပေမယ့် ကောင်းခဲ့တယ်လို့ ထင်တာလေး share လိုက်ပါတယ်
Thanks given by: နတ်ဆိုးကြီး